पर्यटक भित्र्याउन तिम्बुङ पोखरीमा ‘टुरिस्ट हाउस’ « Sansar News
पर्यटक भित्र्याउन तिम्बुङ पोखरीमा ‘टुरिस्ट हाउस’
२४ भाद्र २०७८, बिहीबार १२:५३
२४ भदौ, फुङ्लिङ । तिम्बुङ पोखरीमा पर्यटक भित्र्याउन ‘टुरिस्ट हाउस’ निर्माण गरिएको छ । ताप्लेजुङको सिदिङ्वा गाउँपालिकास्थित तिम्बुङ पोखरी क्षेत्रमा पर्यटक घर (टुरिस्ट हाउस) निर्माण गरिएको हो । कोभिड–१९ का कारणले पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भए पनि आगामी दिनमा पर्यटक भित्र्याउन टुरिस्ट हाउस निर्माण गरिएको हो ।
तिम्बुङ पोखरी क्षेत्रको भ्रमणमा जाने पर्यटकको सुविधाका लागि गाउँपालिकाले पर्यटक आवास घर निर्माण गरेको हो । पाँचथर र भारतको सिक्किमसँग सिमाना जोडिएको सिदिङ्वा–१ कालिखोलामा रहेको तिम्बुङ पोखरी नेपालको १०० पर्यटकीय गन्तव्यमा सूचीकृत छ ।
पूर्वको गोसाइँकुण्डको नामले समेत परिचित तिम्बुङ पोखरी चार हजार ४८० मिटरको उचाइमा छ । निक्कै नै सुन्दर तथा आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य तिम्बुङ पोखरी क्षेत्रको भ्रमणमा जाने पर्यटकको आवास सुविधाका लागि गाउँपालिकाले रु ५५ लाखको लागतमा आवास भवन निर्माण गरेको हो ।
गाउँपालिकाका प्रवक्ता प्रकाश राईका अनुसार पर्यटन मन्त्रालयबाट विनियोजित रु ५० लाख र गाउँपालिकाको पाँच लाखको लगानीमा आवाससहितका संरचना निर्माण गरिएको छ । करिब तीन हजार ८०० मिटर उचाइ रहेको तिम्बुङ पोखरी क्षेत्रको नुनथला ठूलो भञ्ज्याङमा उक्त संरचना निर्माण गरिएको प्रवक्ता राईले जानकारी दिए । उनका अनुसार करिब ४५ जना अटाउन सक्ने क्षमताको पर्यटक आवास घर, भान्सा घर र शौचालय निर्माण गरिएको छ ।
पर्यटक आवास निर्माण भएसँगै गाउँपालिकाले सञ्चालनको तयारी गरेको छ । ठेक्का (बोलपत्र) प्रक्रियामार्फत आवास वार्षिक रु ६२ हजारमा भाडामा लगाएको र अब दशैँ अघि नै सञ्चालनमा आउने पनि प्रवक्ता राईले बताए ।
पर्यटक घर सञ्चालनमा आएपछि तिम्बुङ पोखरी क्षेत्रको भ्रमणमा जाने पर्यटकले खानेबस्ने सुविधा पाउने छन् । हालसम्म तिम्बुङ पोखरीको भ्रमण गर्ने पर्यटकले आवासका रुपमा सो क्षेत्रमा रहेको चौंरी गोठहरुलाई सदुपयोग गर्ने गरेका थिए ।
कालीखोला र सादेवाको माथिल्लो बस्तीदेखि तिम्बुङ पोखरी पुगेर फर्कनलाई कम्तिमा तीन दिन लाग्ने हुँदा सो क्षेत्रमा रहेका सीमित चौंरी गोठमा बास बस्नुपर्ने अवस्था थियो । पर्यटक आवास घर बनेपछि भने बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकलाई सुविधा हुने भएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जीवनकुमार ताम्लिङले बताए ।
पर्यटक अवागमन सहज गर्न तिम्बुङ पोखरी जाने पदमार्गको पनि स्तरोन्नति गरिएको छ । विगत दुई वर्षयता पर्यटन मन्त्रालयकै सहयोगमा पर्यटक आवास घरसहित तिम्बङ पोखरीको सौन्दर्यकरण, पदमार्ग स्तरोन्नतिको कार्य गरिएको ताम्लिङले बताए । मन्त्रालयको सहयोग र गाउँपालिका समेतको साझेदारीमा पर्यटकलाई आराम लिनका लागि पदमार्गको ठाउँ–ठाउँमा विश्रामस्थल समेत निर्माण गरिएको छ ।
तिम्बुङ पोखरी क्षेत्रमा धार्मिक आस्थाका हिसाबले समेत हरेक वर्ष नाग पञ्चमीका दिन उल्लेख्य रुपमा आन्तरिक पर्यटकहरु पोखरीको भ्रमण तथा दर्शनमा पुग्ने गरेका छन् । सुन्दर तथा मनमोहक दृश्य, जडिबुटी, चौंरीपालन, रेडपान्डालगायतको अध्ययन अवलोकन गर्नलाई आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटकले तिम्बुङ क्षेत्रको भ्रमण गर्ने गरेका छन् ।
तीन जिल्लाका लक्षित सबै जनसंख्याले खोप लगाए
काँग्रेसको महाधिवेशन तालिका पुनः परिमार्जन हुने
पछिल्लो २४ घण्टामा देशैभरी थपिए १४७८ कोरोना संक्रमित,…
नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्ताे छ सम्भावना ? यस्ताे छ…
एकीकृत समाजवादीको बैठक : अध्यक्ष नेपालको राजनीतिक प्रतिवेदन…
सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बस्दै, होला त मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णंता…
ह्वात्तै बढ्यो सुनको भाउ, आज कति छ प्रतितोला ?
काठमाडौं । केही दिनदेखि निरन्तर घट्दै आएको सुनको भाउ बुधवारको बजारमा ह्वात्तै वृद्दि भएको
खड्काको नियुक्तिप्रति कांग्रेसमा तिव्र असन्तुष्टी, पौडेल पक्षले बोलायो बैठक
काठमाडौं । नेता डा. नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री बनाएको प्रति कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टी देखिएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्धारा परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सम्बन्धी सूचना जारी
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुले परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सम्बन्धी सूचना